Dagaal u dhaxeeya ciidamada xasilinta muqdisho iyo dableey hubeysan oo ka dhacay dagmada wadajir – Somnews
Dagaal u dhaxeeya ciidamada xasilinta muqdisho iyo dableey hubeysan oo ka dhacay dagmada wadajir
By somnews	 On May 30, 2017
Warar dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayn iska hor imaad u dhaxeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka oo ka dhacay dagmada wadajir ee gobolka banaadir.
iska hor imaadkaan ayaa waxaa uu dhexmaray ciidamada howlgalka xasilinta caasimadda muqdisho iyo ciidamo hubeysan oo ku sugan dagmada wadajir.
Dagaalkaan ayaa yimid ka dib markii ciidamada Xasilinta Caasimada ay isku dayeen in ay hub ka dhigis ku sameeyaan ciidamo ku sugnaa degmadaasi balse ay ciidanka iska diideen in ay hubka dhigaan sidaasna uu dagaalka ku bilowday.
Ciidamada ammaanka ee u xil saaran howl galka xasilinta Muqdisho ayaa gacanta ku dhigay mid ka mid ah qorigii uu watay ninkii hubeysnaa, halka midka kalena uu baxsaday.
Xiisad ayaa ka dhalatay hub ka dhigista ciidanka hubeysan ee muqdisho ku yaacsan waxaana dagmada wadjir maanra ka jirta xiisad kulul iyadoona markii dambe maamulka dagmada iyo sarakiil ay kusoo baxeen xiisaddan ciidanka howlgalka xasilinta muqdisho waxaa laga codsaday in xiisadda ay dajitaan.
Ciidamo dheeraad ah oo ka socda howlgalka xasilinta muqdisho ayaa gaaray dagmada wadajir gaar ahaan halka iska hor imaadka uu ka dhacay waxaana dadka deegaanka soo food saartay xaalad cabsi ah.
Amarkaan ayaa waxaa horay usoo saaray golaha wasiirada iyadoona ciidanka howlgalka xasilinta muqdisho amar buuxa lagu siiyay in hub ka dhigis ay ku sameeyaan ciidanka muqdisho hubka aan sharciyeysneyn ku dhex wata waxaa sidoo kale saraakiisha iyo madaxda dowladda lagu amray in aysan wadan karin wax ka badan afar askari oo qoriga AK47-ka ah wata waxaana la diiday in qoriga dhashiikaha lagu dhex wato gudaha caasimadda.
Sawirro: Diyaaraddii saakay kusoo dhacday garoonka aadan cadde iyo cida ay u kireysneyd